वैदेशिक शिक्षा पारखीका लागि आजदेखि राजधानीमा वृहत शैक्षिक मेला
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले बिहिबारदेखि बृहत शैक्षिक मेला आयोजना गर्दैछ। राजधानीको भृकुटीमण्डपमा हुने एघारौं इक्यान मेला चार दिनसम्म चल्नेछ।
नेपाली विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशी एवम् विदेशी शिक्षा प्रणाली तथा प्राप्त योग्यताको भावि सम्भावना र अवसरहरुको परामर्श दिन मेलाको आयोजना गरेको नेपाल शैक्षिक पारमर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले सेतोपाटीलाई बताए। विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई अध्ययनबारे जानकारी दिन हरेक वर्ष मेला आयोजना गरिने पाण्डेले बताएर ‘मेला बिगतको भन्दा बृहत हुनेछ। विदेशमा पढाई हुने कोर्ष, विभिन्न देशको भिसा नीतिको बारेमा हामी मेलामा जानकारी गराउँछौ,’ उनले भने।
विद्यार्थी र अभिभावकलाई एकै ठाउँमा राखेर वेदेशिक अध्यनका लागि सुसूचीत गराउनु नै मेलाको एक मात्र उद्धेश्य रहेको इक्यानले जनाएको छ। ‘यो एउटै त्यस्तो थलो हो जहाँ विद्यार्थी र अभिभावकलाई धेरै भन्दा धेरै विदेशी र स्वदेशी शिक्षण संस्थलाई भेट्ने र सूसुचीत हुने अवसर प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने।
व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुका साथै विद्यार्थी र अभिभावकलाई बढी भन्दा बढी सूसुचीत गराएर ढुक्क बनाउनु नै मेलाको उद्धेश्य हो। पाण्डेले नेपालमा राम्रा शैक्षिक संस्था भए पनि राज्यले विदेशी विद्यार्थी नेपाल भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीति र सुविधाको व्यवस्था गर्न नसक्दा आफूहरुले चाहेर पनि नेपाललाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्न नसकेको गुनासो पोखे।
नेपालको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भनेर राज्यले नै विश्वमा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनार्इं छ। नेपालमा शैक्षिक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम नल्याएसम्म विदेशी विद्यार्थी नेपाल आउन कठीन हुने पाण्डेको विश्लेषण छ ।
‘विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई हामीले नजान त भन्न सक्दैनौं तर उनीहरुलाई पुनः नेपाल फर्कन भने पहल गरिरहेका छौं। हामीले यसको लागि यो ठाउँ र समय उचित छ र तिम्रो भविश्य पनि उज्वल छ नेपालमा नै बस भनेर भन्ने अवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल जस्तो प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देशमा एजुकेशन हव बनाउन सकेमा देश र जनता सबैको भलो हुन्थ्यो। यस विषयमा सरकारले नै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दसकौ लामो गृहयुद्वबाट पीडित श्रीलंकाले त अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना लिइरहेको छ भने हामी किन सक्दैनौ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’
[caption id="attachment_63876" align="alignright" width="322"] प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)[/caption]
नेपालमा विद्यार्थी सुहाउँदो शैक्षिक प्रणाली छैनः पाण्डे
नेपालको शिक्षा खराब होइन। तर जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो छैन। पढ्ने कोर्ष पनि पर्याप्त छैन। रोजगारमुखी शिक्षा छैन। कुनै ठाउँमा जागिर खान निवेदन दिनपुर्‍यो भने त्यो निवेदन लेख्न सक्ने बनाउने हाम्रो देशमा छैन।
हाम्रैमा स्तरीय कलेजहरू पनि छन्। तर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जति हुनुपर्थ्यो त्यती छैन। उपलब्धिमुलक शिक्षा नेपालमा छैन। नेपालमा पढ्नेबित्तिकै रोजगारीको अवसर छैन। नेपालमा विद्यार्थीले पढेपछि के गर्ने अन्यौल हुन्छ। विद्यार्थीसँग भएको क्षमता, योग्यता लगानी अनुसारको पढाइ नेपालमा छैन।
जो आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैनन् उनीहरू खाडी मुलुक जाने भए। जो अवसरको अभागमा तड्पिएका हुन्छन् त्यस्ता विद्यार्थीहरू विदेश नगए कहाँ जानु?
राम्रो शिक्षाको खोजिमा विदेसिएका नेपाली विद्यार्थीले लगानी धेरै गरेको हुन्छ। हो नेपाली पुँजी विदेशिन्छ तर कालान्तरमा नेपाली विद्यार्थीहरू राम्रा दक्ष जनशक्तिका रूपमा निस्किएर फाइदा नेपाललाई नै हुने हो।
नेपालमा आफू सुहाउँदो शिक्षा नपाएर विदेसिएकालाई कसरी पलायन भन्ने त्यो त अवसरको खोजिमा हिँडेका हुन्। हामी काठमाडौंबाहिरको मान्छे काठमाडौं आएर उच्च शिक्षा लिँदा चै पलायन नदेख्ने अनि विदेश गएर उच्च शिक्षा लिने विद्यार्थीचै कसरी पलायन भए?
हामीलाई सबै डाक्टर इन्जिनियर चाहिएको छैन। प्लम्बर,कार्पेन्टर पनि चाहिएको छ। हामी त्यही अवस्थाका शिक्षा नेपालका छैन। यहीबाट बिदेश पढ्न गएर NRN बनेकाहरू पनि नेपाली नै हुन्। उनीहरूले पनि विकास गर्ने नेपालकै लागि हो र खर्च गर्ने भनेको आफ्नै मातृभूमीका लागि हो। यी र यस्ता सबै कुरा बुझाएर विदेश पठाउने नै ईक्यान मेलाको मुख्य उद्धेश्य हो। कोही विदेश जाँदैछ भने कसैले रोक्न सक्ने छैन। बरू जाँदा खेरी त्यहाँको बस्तुस्थितिका बारेमा राम्रो जानकारी लिएर जान सकन् र त्यहाँ दुःख नपाउन् भनेर यसको आयोजना गरेका हौ। त्यसलाई हामीले दिएको सूचना र सल्लाहाका आधारमा पालाना गरेर आओस भोलि नेपाल फर्केर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनासँग जोडियोस्। यसलाई दिर्घकालिन रूपमा सोच्ने हो भने फाइदा हाम्रै लागि हुन्छ।
मेलामा परामर्श दिने संस्थाहरुको दुई सय ३६ स्टल हुनेछ । त्यस्तै १४ वटा पेभिलियन पनि हुनेछ । १५० भन्दा बढी एक्जिभिटर, ९० भन्दा बढी विदेशी शिक्षण संस्थाहरू ५० वटा भन्दा डेस्टिनेशन र १०० भन्दा बढी एजुकेशन कन्सल्ट्यन्सी सहभागी भएको मेलामा व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने र सरोकारवाला अभिभावक, विद्यार्थीलाई सुचित गराउने मुख्य उद्धेश्य राखेको छ।
मेलामा आउने विद्यार्थीले विदेशमा पढ्नका लागि आवश्यक नीति नियम, भर्ना प्रक्रिया, भिसा आवेदन देखि लिएर सुरक्षित र गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीलाई ढुक्क बनाउने आयोजकले दाबी गरेको छ।
मेलामा विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशको बदलिदो भिसा प्रणाली, शैक्षिक स्थिति नीति नियम भिसा प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने कागजपत्र सहजिकरण जस्ता विषयबस्तु मेलामा आउने विद्यार्थी र अभिभावकहरूले पाउने छन्। बिगतको मेलामा विदेशी शिक्षण संस्थाले सिधै स्टल राख्ने गरेको थियो।
यसपाली इक्यान सदस्य मार्फत मात्रै स्टल राख्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मेलामा श्रीलंकाका मात्र चार वटा स्टल रहेनेछन्। अष्ट्रेलियाको १८ वटा, न्यूजिल्याण्डको आठ वटा शैक्षिक संस्थाले रहनेछ।
यस बाहेक जापान, भारतको शैक्षिक संस्थाको पनि स्टल रहने छ। विभिन्न देशमा परिवर्तन भएको नीतिको बारेमा जानकारी लिन भए पनि मेलामा जानै पर्ने उनले बताए। ‘विभिन्न देशको नीति परिवर्तन भएको छ। यो बारेमा पनि जानकारी दिन्छौं,’उनले भने,‘त्यस बाहेक मेलामा करिअर काउन्सिलिङ पनि गर्छौ।’
स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरु, विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति, सुविधा एवम् गुणस्तरीय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीहरुको समुचित पहुँचको लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्नु परामर्श दातृ संस्थाको मुख्य दायित्व भएको उनले दोहोर्‍याए।
विदेश अध्ययन जानुअघि सही जानकारी पाउन पनि मेला उपयुक्त थलो हुने उनले सुझाए विद्यार्थीको चासो रहेको सबैजसो मुलुकमा काम गर्ने कन्सल्टेन्सीले स्टल राख्ने भएकोले गल्ली चाहर्नु पर्ने झन्झटबाट पनि मुक्ति पाइन्छ। ‘मेलामा आधिकारिक प्रतिनिधिहरुको स्टल रहेको छ,’ उनले भने, ‘एकै दिनमा सबै मुलुकको सूचना पाइन्छ ।’
मेलामा दक्ष परामर्शदाताबाट काउन्सिलिङ हुनेछ। ‘मेलामा योग्य परामर्शदाताबाट सूचना पाइने भएकोले विद्यार्थीको साथमा अभिभावक पनि उपस्थित हुँदा धेरै राम्रो हुन्छ,’उनले भने ।
शिक्षा र अवसरको खोजिमा विदेश जान चाहने विद्यार्थीले ‘फलानो पनि गएको छ म पनि विदेश जान्छु’ भन्ने सोच बनाएको भए गलत हुन्छ। अर्को कुरा अभिभावकले पनि आफ्नो सन्तानको भविश्यका लागि अझ भनौ उसलाई के भएको हेर्न चाहनु भएको छ र उसले त्यो पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । पैसा नै कमाउन मात्र विदेश जान चाहेको हो भने विदेशमा पैसा फल्ने रुख छैन जहाँ तपाई जाने वित्तिकै टिप्न सक्नुहुन्न । यो कुरा अभिभावक र विद्यार्थी दुबै पक्षले बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
‘यहाँ कस्ता पनि कन्सलटेन्सीहरु छन् भने तपाई विदेश जान चाहनुहुन्छ भने हामी भिसाको ग्यारेन्टी गरिदिन्छौ भनेर प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो विषयमा कुनै ग्यारेन्टी भन्ने नै हुँदैन । यो कुरा विद्यार्थी स्वयम् र अभिभावले बुझ्नु जरुरी छ,’ पाण्डेले भने।
बिहिबारदेखि हुने मेलामा विद्यार्थीसँगै अभिभावक पनि आउनु जरूरी रहेको उनले बताए। विद्यार्थी जान चाहेको देशमा आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षता र नेचर अनुसार टिक्न सक्छन् कि सक्दैन। लगानी आज कति छ भोलि कति हन्छ। प्रक्रिया कस्तो हुन्छ। सेवा शुल्क के कस्तो बुझाउनु पर्ने रैछ।
एउटामा मात्र होइन दुई तीन वटा पवेलियनमा बुझेर अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसैले वैदेशिक शिक्षाको जानकारी लिने एक मात्र ठाउँ भनेको मेला हो। कन्सलटेन्सीहरू ठग हुन् मानव तस्करी हुन् लगायतका विभिन्न किसिमका नकारात्मक कुरा सुनिरहेकाहरूलाई पनि विश्वस्थ हुन मेला आउने पर्ने हुन्छ। यदि विदेशनै नगए पनि विश्वका अरू देशहरू कसरी शैक्षिक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसबारे पनि जानकारी हुन्छ।
शैक्षिक मेलामा १ लाख ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी र अभिभावकले अवलोकन गर्ने आयोजकले लक्ष्य लिएको छ। मेलामा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका,जापान, फ्रान्स, अमेरीका, बेलायत, न्युजील्याण्ड, अष्ट्रेलिया,आयरल्याण्ड, नर्वे, फिनलैण्ड, मलेसिया, जर्मन, रुस, डेनमार्क लगायत देशका कलेज तथा विश्वविद्यालयका आधिकारीक प्रतिनिधिहरुको सहभागि हुनेछन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ५, २०७४, ०७:३२:१४